शेयर बजारमा सामान्य सुधार, कसले कमाए, कसले गुमाए ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, कसले कमाए, कसले गुमाए ?
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.१५ विन्दुले बढेर एक हजार १७२.९८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.६९ विन्दुले बढेर २४८.७४ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कूल १६३ कम्पनीको १० लाख दुई हजार १०७ कित्ता शेयर रु २४ करोड ७७ लाख ४३ हजार १५५ मूल्यमा खरीद बिक्री भयो ।
कारोवार भएका कूल ११ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर ओरालो लाग्यो भने नौ उपसमूहको शेयरमा वृद्धि भएको छ ।उत्पादन ३१.६ र जीवन बीमा २७.३१ विन्दुले घट्दा बैंकिङ १.४९, व्यापार २.८७, होटल ०.२१, विकास बैंक ६.८६, जलविद्युत् ३१.४८, वित्त ०.७९, निर्जीवन बीमा ५८.०६,अन्य ३.३९ र लघुवित्त १२.९९ विन्दुले बढेका छन् ।
स्टकका अनुसार आज सानिमा इक्वीटी फण्ड, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले कमाएका छन् । यस्तै जोशी हाइड्रो पावर, गुर्खाज फाइनान्स, पञ्चकन्या माइहाइड्रो पावर, तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंक, यूनिलिभर नेपालका शेयरधनीले आज गुमाएका छन् ।
गगनको बुझाईमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कति सफल कति असफल ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिने भारत भ्रमण सक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई […]
संसद्लाई कसैको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्नुहुँदैनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको चासोका विषयमा बहस गर्ने थलो संघीय संसद्लाई कोही मान्छेको […]
दुर्घटनामा बाँचेका घाइते यसो भन्छन्
जुम्ला, कालिकोटमा भएको काष्ठमण्डप एयरको विमान दुर्घटनामा परेर बाँचेका यात्रुले आफूहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न […]
नेपालीहरूले पुर्वमन्त्रिका साथ अष्ट्रेलियामा आदिवासी दिवस मनाए
सिड्नी। आदिवासिहरूको ५० हजार वर्ष लामो ईतिहास भएको देश मानिने अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूले विश्व आदिवासि दिवस […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अंकमालको चर्चा-परिचर्चा
असार १४ । पछिल्लो समय चार दिने विदेश यात्रामा निस्केका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोर्चुगल, अमेरिका […]